Lapho umgwaqo Th6 le Clash umdlalo of kwamaqembu
Ngaphambi kokuqhubeka incazelo isu kangcono lo mdlalo, kubalulekile ukuchaza kabanzi Gameplay. Lo mdlalo unika wonke umuntu ithuba lokuyala ibutho lakho virtual nangokucikoza ukuvikela esiphathiswe emzaneni ezitheni. Player ukujabulela eliphezulu ukuhumusha futhi inani elikhulu amathuba olunikezwa onjiniyela.
Umdlalo has 4 izinhlobo izinsiza: i elixir zegolide, elixir amnyama kanye amagugu. Yonke imithombo, ngaphandle amatshe ayigugu, kungaba buthelela kokubili empini futhi iqoqe ezimayini kanye abaqoqi elixir. Amagugu kungenziwa ekhishwe ngokususa kwezihlahla notshani, ezimila ngesisekelo ngezikhathi, noma angathengwa nge-Google Play futhi App Store for imali yangempela.
Trophies (izinkomishi), lolu phiko
Ukuze uphumelele kuhlasela umdlali uthola Trophies noma, njengoba abanye bekubiza kubo, nezitsha zokuphuza. Uma emzaneni ehlaselwa umdlali futhi "khipha" ngaphezu kwesigamu emzaneni, ababhubhise ihholo ledolobha, lo mdlali ilahlekelwa ethile Trophies. Lapho ufika iyiphi inombolo izinkomishi umdlali engena league ezithile ukunikeza abanye amalungelo. Ayanda league, aba maningi amathuba okuba ugcine bazokwazi ukujoyina steeper emindeni steeper uthole khona amabutho.
izinsiza Ukuxhumana kanye izinkomishi ne okukhethwa kukho ukubekwa Th6
Kodwa kanjani oxhumene ilungiselelo Th6 isizinda kanye nenani izinsiza izinkomishi? Kuye okuthandayo womdlali, angakwazi ukwakha isizinda zazo ukuvikelwa ukulondoloza izinsiza futhi ngeke ogxile ngokuphelele kulondolozwe inani izinkomishi noma isizinda ezokwenza ukumelana nezitha ezinamandla kakhulu futhi ngeke babanike Trophies. Ngakho, kunezinhlobo ezimbili zama- elisekela ezempi ngo Ukungqubuzana umdlalo kwamaqembu ukuqondanisa Th6 kubalulekile Wabasaqalayo ngoba kulelizinga sehholo ledolobha (Tx) uya ngcono kwazo zonke izakhi eziyisisekelo base. Kusukela ngalowo mzuzu umdlalo uba mnandi futhi mnandi. Ngakho sidinga ukulingana Th6. Siphendukela lesi sinyathelo esibalulekile.
Lapho umgwaqo base Th6
Ungase uthi ngisho ukuthi - yisigaba esibaluleke kakhulu. Lapho umgwaqo Th6 iqala nge ngokuchaza oyifunayo kithi base hlobo. Njengoba kushiwo ngenhla, kukhona izinhlobo ezimbili yolwazi: I-ukongiwa kanye nokuvikelwa. Ukuze uqale nge uhlobo lokuqala. Town Hall lakhishwa odongeni. Phakathi kuyadingeka ukubeka clan nqaba futhi buyela izinhlangothi ezintathu isikhali: ilungelo emoyeni ukuzivikela, phezulu kanye phansi - nodaka. Ukusuka kwesobunxele ukubeka ngalendoda we elixir. Ilungelo nombhoshongo emoyeni ukuzivikela setha wizadi. Ukuze kwesokunxele ngalendoda onikhiphele elixir ukuze kuvikeleke omunye umbhoshongo umthakathi. Isiqalo nesigcino kube encapsulated ukuze izigqulo babengaphandle kwesitokisi izindonga. Mayelana izigqulo uhlele abacibisheli umbhoshongo futhi obnesom izindonga zawo. Ngaphezu kwalokho, izinhlangothi isitoreji futhi ukuletha kubo lonke Ukuvikelwa. Obnesom zonke izindonga kukhona nenye nothango oluzungeze izinto base. Lapho umgwaqo Th6 kuphelile!
Uma sakha nohlaka ukuvikelwa, sizokwenza ukubeka kwaMuhle maphakathi. Abaseduze kwakhe ukuthumela izigqulo ezimbili, emoyeni ukuzivikela futhi castle clan obnesom izindonga. Ngaphansi nasekwenzeni kwesokunxele ukuzivikela emoyeni ukubeka abacibisheli umbhoshongo. Nalapha obnesom izindonga. Ngaphansi abacibisheli umbhoshongo ukubeka isibhamu, futhi eduze kwalo - onalo igolide noma isitoreji elixir. Ngaphansi umbhoshongo kwesokudla izigqulo ukubeka umthakathi, futhi eduze kwalo - abacibisheli umbhoshongo negolide / eliksirohranilische. Ngenhla izigqulo kwesokunxele ukubeka umthakathi yayinemibhoshongo ngemuva nangaphambili, izibhamu, USB. Ngakwesokudla clan castle uhlele esitolo futhi awuvikele abacibisheli isibhamu umbhoshongo. Vala zonke izimbobo ezindongeni. Beka azungeze base asele ezimayini, abaqoqi elixir, ibhalekisi, amakamu, ekhaya abakhi nezinye izakhiwo. Manje ibhalansi Th6 kuqede ngempumelelo!
Njengasekhulwini Ukuvuselela yamuva we Onjiniyela wanezela ikhono alondoloze ukuhlela ngempumelelo emizaneni, ungakwazi bashintshane ukusebenzisa zombili izinhlobo izakhiwo ngaphandle isidingo isikhathi ngasinye kabusha kabusha emzaneni.
Uma ukwakha isizinda uma sicabangela lezi amathiphu, uzoba ujabule ukudlala kule Ukungqubuzana kwamaqembu - ukubekwa Th6 akunzima, futhi uqiniseka uyojatshuliswa ikhono ukumelana nezitha ezinamandla noma ikhono ngokushesha buthelela izinsiza ezidingekayo okudingayo.
Indlela yokuthuthukisa "FPS" e "Rast": ngixazulule inkinga yokuntuleka kwezinto zokukhiqiza ongaphakeme
Bangaki ohambweni GTA 5 ku-PC?
Lapho umgwaqo i-TX 10 Clash of kwamaqembu. izinqumo eziphezulu lezisekelo
Izinto ezilusizo mdlalo, "Terraria". Potion gravity
Indlela zivuleka iwashi e PV. amakhono
Kusho ukuthini ukuba iqhwa izimali yempesheni yonyaka? Yini esongela ukumisa ukonga impesheni?
Blazer Modern. Kusukela classical ukuze avant-garde
Phendula umbuzo: "? Kanjani ukwenza konke ngaphandle neurosis"
Tattoo Lizard. Inani
Uyini "Berkut"? Lokho "berkutovtsy" Wenza Evromaydane?
Yelena nencazelo yegama kanye nemvelo